Kungani kuthiwa isintu esikhohlakele sidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu abe yinyama? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Okwedlule: Yini umehluko obalulekile phakathi kukaNkulunkulu esimweni somuntu kanye nalabo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu?
Okulandelayo: Kungani kuthiwa izimo ezimbili zikaNkulunkulu esenyameni ziphelelisa ukubaluleka kokuba sesimweni somuntu?
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Futhi kuyakuthi ngezinsuku zokugcina intaba yendlu yeNKOSI imiswe esiqongweni sezintaba, futhi iphakame...
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Wayesethi, Ngiyakucela, ngikhombise inkazimulo Yakho. Wathi, ngiyokwedlulisa konke ukulunga Kwami phambi...